မနျယူနိုကျတကျ Vs လီဗာပူး တို့ရဲ့ ပှဲစဉျကို အထူး ခနျ့မှနျးပေးလိုကျတဲ့ ပေါလျစခိုး နဲ့ ဂြာရတျ - SPORTS MYANMAR
မနျယူနိုကျတကျ Vs လီဗာပူး တို့ရဲ့ ပှဲစဉျကို အထူး ခနျ့မှနျးပေးလိုကျတဲ့ ပေါလျစခိုး နဲ့ ဂြာရတျ
ပရီးမီးယားလိဂျ ဂန်တဝငျတှေ ဖွဈကွတဲ့ ပေါလျစခိုး နဲ့ စတီဗငျဂြာရတျ တို့ဟာ လာမညျ့ တနင်ျဂနှနေေ့ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျ နဲ့ လီဗာပူး တို့ အိုးထရပျဖို့ဒျမှာ ရငျဆိုငျ ကစား သှားရမယျ့ ပှဲကွီး ပှဲကောငျးမှာ သူတို့ရဲ့ အသငျးဟောငျးတှေ အနိုငျ ရလိမျ့မယျလို့ အသီးသီး ထောကျခံ သှားခဲ့ပါတယျ။
ယာဂနျကလော့ရဲ့ လီဗာပူး အသငျးဟာ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျ ပှဲစဉျ ၈ အပွီးမှာ ပှဲအားလုံးကို အနိုငျ ရရှိ ထားခဲ့ပွီး ရမှတျ ၂၄ မှတျနဲ့ ထိပျဆုံး နရောမှာ ရပျတညျ နကော ဒုတိယ နရော လကျရှိ ခနျြပီယံ မနျစီးတီးကို ၈ မှတျ ဖွတျထား နိုငျခဲ့ ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ယာဂနျကလော့ ဟာ လီဗာပူး နညျးပွ ဘဝ အိုးထရပျဖို့ဒျကို လာရောကျ ကစား ခဲ့ဖူးတဲ့ ၄ ပှဲမှာ တဈပှဲမှ အနိုငျ မရ ဖူးသေး ပါဘူး။
အိုလီဂနျနာ ဆိုးရှားရဲ့ ယူနျိုကျတကျ ကတော့ ဒီရာသီ အစ ရလဒျဆိုး တှကွေောငျ့ ဒီပှဲကို ကွီးမားတဲ့ ဖိအားတှနေဲ့ ၀ငျသှား ရမှာ ဖွဈပွီး မနျခကျြစတာ ကလပျဟာ ပှဲစဉျ ၈ ပှဲ ကနေ ရမှတျ ၉ မှတျသာ စုဆောငျး ထားနိုငျ ခဲ့ပွီး အမှတျပေးဇယား ရဲ့ အဆငျ့ ၁၂ နရောထိ ရောကျနေ ခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး နျောဝေး နညျးပွရဲ့ အသငျးဖျောဟောငျး ဖွဈတဲ့ စခိုး ကတော့ အိမျရှငျ အသငျး အနနေဲ့ တနင်ျဂနှနေမှေ့ာ စမျးသပျခံ နိုငျလိမျ့မယျလို့ ယူဆ နပေါတယျ။
ယူနိုကျတကျ တို့ လီဗာပူးကို နာကငျြမှု ပေးစှမျး နျိုငျမလား ဆိုတဲ့ မေးခှနျး ကို စခိုးက “အမှနျပါပဲ။ ကြှနျတျော ဒီလို ထငျပါတယျ။ ယူနိုကျတကျရဲ့ သှငျးဂိုးတှေ ဘယျက လာမလဲ ဆိုတာကို မြှျောကွညျ့ဖို့ ခကျခဲတယျ ဆိုတာ ကြှနျတျော သိပါတယျ။ ဒီပှဲမှာတော့ တဈဦးခငျြး အကောငျးဆုံး စှမျးဆောငျတှပေဲ တှရေ့ဖို့ မြားနပေါတယျ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ အသငျးရဲ့ ဖနျတီးမှု စှမျးရညျဟာ သိပျပွီး မကောငျးလှ ပါဘူး။ အထူး သဖွငျ့ ပေါ့ဘာ မကစား နိုငျတဲ့ အခြိနျမှာပေါ့။
မားကပျရပျဖို့ဒျဟာ ပှဲကို အဆုံးအဖွတျ ပေးနိုငျစှမျး ရှိပါတယျ။ ဒနျဂြိမျးဈ ကလညျး ဒီလိုမြိုး လုပျနိုငျ ပါတယျ။ set-pieces တှကေနေ မကျဂှိုငျးယား ကလညျး ဒီလို စှမျးဆောငျ နိုငျစှမျး ရှိပါတယျ။” လို့ ဆိုသှား ပါတယျ။
စခိုးဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီ အိုးထရပျဖို့ဒျမှာ ဂိုးမရှိ သရေ ကခြဲ့တဲ့ ပှဲစဉျ နဲ့ ပကျသကျပွီး လီဗာပူးကို ခနဲ့တဲ့တဲ့ ပွောလိုကျကာ အဲဒီမှာ ရမှတျ ၂ မှတျ ဆုံးရှုံး ခဲ့ခွငျးဟာ လီဗာပူးကို ပရီးမီးယားလိဂျ title race မှာ နဈနာ စခေဲ့တယျလို့ ဆိုသှား ပါတယျ။
စခိုးက “လီဗာပူးဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ နှဈက အိုးထရပျဖို့ဒျမှာ အနိုငျရမယျ့ အခှငျ့အရေးကွီးကို လကျလှတျ ခဲ့ပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ နှဈ အိုးထရပျဖို့ဒျ က ရလဒျကွောငျ့ သူတို့ အမှတျပေးဖလား ဆုံးရှုံး ခဲ့တယျ ဆိုပွီး ငွငျးလို့ ရပါတယျ။ ယူနိုကျတကျဟာ အဲဒီတုနျးက ဒဏျရာတှနေဲ့ ရုနျးကနျ ခဲ့ရပွီး ဒီနှဈမှာလညျး ဒီလိုမြိုး ဖွဈနပေါတယျ။ ပထမပိုငျး နာရီဝကျမှာတငျ ယူနိုကျတကျတို့ ၃ ကွိမျ လူစားလဲ ခဲ့ရပါတယျ။ လီဗာပူးဟာ အဲဒီနကေ့ အတျော ညံ့ခဲ့ ပါတယျ။
လီဗာပူးဟာ အသငျးကောငျး ဆိုတာ ကြှနျတျောတို့ သိပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ သူတို့ရဲ့ အရညျအသှေးကို သိပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့ အိုးထရပျဖို့ဒျကို လာပွီး အနိုငျယူ နိုငျစှမျး ရှိနေ ပါသေးတယျ။” လို့ ဆိုသှား ပါတယျ။
လီဗာပူး အသငျးခေါငျးဆောငျ စတီဗငျဂြာရတျ ကလညျး လိဂျပွိုငျပှဲမှာ ဦးဆောငျ နသေူဟာ လှနျခဲ့တဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှဈ နောကျပိုငျး အိုးထရပျဖို့ဒျမှာ ပထမဦးဆုံး အကွိမျ နိုငျလိမျ့မယျလို့ ဆိုသှားခဲ့ပွီး အဆိုပါ ရာသီက ၃-၀ နိုငျပှဲမှာ ဂြာရတျဟာ ပငျနယျတီ ကနေ ၂ ဂိုး သှငျးပေး ခဲ့ပါတယျ။
ဂြာရတျက ‘အမှနျပါပဲ။ လီဗာပူး နျိုငျပါလိမျ့မယျ။ သူတို့ဟာ ၈ ပှဲ ကစားထားခဲ့ပွီး ၈ပှဲစလုံး နိုငျထား ခဲ့ပါတယျ။ ၃ ဦးတှဲ တိုကျစဈဟာ အကောငျးဆုံး ပုံစံ ပွသနပွေီး သူတို့ဟာ ဂိုးတှေ အမြားကွီး ပေးထား ရခွငျး မရှိသလို သူတို့ဟာ ဥရောပ ခနျြပီယံပါ။ လီဗာပူးတို့ ယူနိုကျတကျကို ဘာကွောငျ့ အနိုငျရမှာလဲ ဆိုတဲ့ အခွား အကွောငျးပွခကျြ ခငျဗြားတို့ လိုခငျြ သေးလို့လား? ကြှနျတျော ခွားနားတဲ့ အရာ ပွောလိမျ့မယျလို့ ခငျဗြားတို့ ထငျနလေို့လား?” လို့ ဆိုသှား ပါတယျ။
မန်ယူနိုက်တက် Vs လီဗာပူး တို့ရဲ့ ပွဲစဉ်ကို အထူး ခန့်မှန်းပေးလိုက်တဲ့ ပေါလ်စခိုး နဲ့ ဂျာရတ်
ပရီးမီးယားလိဂ် ဂန္တ၀င်တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ပေါလ်စခိုး နဲ့ စတီဗင်ဂျာရတ် တို့ဟာ လာမည့် တနင်္ဂနွေနေ့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် နဲ့ လီဗာပူး တို့ အိုးထရပ်ဖို့ဒ်မှာ ရင်ဆိုင် ကစား သွားရမယ့် ပွဲကြီး ပွဲကောင်းမှာ သူတို့ရဲ့ အသင်းဟောင်းတွေ အနိုင် ရလိမ့်မယ်လို့ အသီးသီး ထောက်ခံ သွားခဲ့ပါတယ်။
ယာဂန်ကလော့ရဲ့ လီဗာပူး အသင်းဟာ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် ၈ အပြီးမှာ ပွဲအားလုံးကို အနိုင် ရရှိ ထားခဲ့ပြီး ရမှတ် ၂၄ မှတ်နဲ့ ထိပ်ဆုံး နေရာမှာ ရပ်တည် နေကာ ဒုတိယ နေရာ လက်ရှိ ချန်ပီယံ မန်စီးတီးကို ၈ မှတ် ဖြတ်ထား နိုင်ခဲ့ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယာဂန်ကလော့ ဟာ လီဗာပူး နည်းပြ ဘ၀ အိုးထရပ်ဖို့ဒ်ကို လာရောက် ကစား ခဲ့ဖူးတဲ့ ၄ ပွဲမှာ တစ်ပွဲမှ အနိုင် မရ ဖူးသေး ပါဘူး။
အိုလီဂန်နာ ဆိုးရှားရဲ့ ယူနိုက်တက် ကတော့ ဒီရာသီ အစ ရလဒ်ဆိုး တွေကြောင့် ဒီပွဲကို ကြီးမားတဲ့ ဖိအားတွေနဲ့ ၀င်သွား ရမှာ ဖြစ်ပြီး မန်ချက်စတာ ကလပ်ဟာ ပွဲစဉ် ၈ ပွဲ ကနေ ရမှတ် ၉ မှတ်သာ စုဆောင်း ထားနိုင် ခဲ့ပြီး အမှတ်ပေးဇယား ရဲ့ အဆင့် ၁၂ နေရာထိ ရောက်နေ ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း နော်ဝေး နည်းပြရဲ့ အသင်းဖော်ဟောင်း ဖြစ်တဲ့ စခိုး ကတော့ အိမ်ရှင် အသင်း အနေနဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ စမ်းသပ်ခံ နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယူဆ နေပါတယ်။
ယူနိုက်တက် တို့ လီဗာပူးကို နာကျင်မှု ပေးစွမ်း နိုင်မလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်း ကို စခိုးက “အမှန်ပါပဲ။ ကျွန်တော် ဒီလို ထင်ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်ရဲ့ သွင်းဂိုးတွေ ဘယ်က လာမလဲ ဆိုတာကို မျှော်ကြည့်ဖို့ ခက်ခဲတယ် ဆိုတာ ကျွန်တော် သိပါတယ်။ ဒီပွဲမှာတော့ တစ်ဦးချင်း အကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင်တွေပဲ တွေ့ရဖို့ များနေပါတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ အသင်းရဲ့ ဖန်တီးမှု စွမ်းရည်ဟာ သိပ်ပြီး မကောင်းလှ ပါဘူး။ အထူး သဖြင့် ပေါ့ဘာ မကစား နိုင်တဲ့ အချိန်မှာပေါ့။
မားကပ်ရပ်ဖို့ဒ်ဟာ ပွဲကို အဆုံးအဖြတ် ပေးနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။ ဒန်ဂျိမ်းစ် ကလည်း ဒီလိုမျိုး လုပ်နိုင် ပါတယ်။ set-pieces တွေကနေ မက်ဂွိုင်းယား ကလည်း ဒီလို စွမ်းဆောင် နိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။” လို့ ဆိုသွား ပါတယ်။
စခိုးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီ အိုးထရပ်ဖို့ဒ်မှာ ဂိုးမရှိ သရေ ကျခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ် နဲ့ ပက်သက်ပြီး လီဗာပူးကို ခနဲ့တဲ့တဲ့ ပြောလိုက်ကာ အဲဒီမှာ ရမှတ် ၂ မှတ် ဆုံးရှုံး ခဲ့ခြင်းဟာ လီဗာပူးကို ပရီးမီးယားလိဂ် title race မှာ နစ်နာ စေခဲ့တယ်လို့ ဆိုသွား ပါတယ်။
စခိုးက “လီဗာပူးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်က အိုးထရပ်ဖို့ဒ်မှာ အနိုင်ရမယ့် အခွင့်အရေးကြီးကို လက်လွှတ် ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ် အိုးထရပ်ဖို့ဒ် က ရလဒ်ကြောင့် သူတို့ အမှတ်ပေးဖလား ဆုံးရှုံး ခဲ့တယ် ဆိုပြီး ငြင်းလို့ ရပါတယ်။ ယူနိုက်တက်ဟာ အဲဒီတုန်းက ဒဏ်ရာတွေနဲ့ ရုန်းကန် ခဲ့ရပြီး ဒီနှစ်မှာလည်း ဒီလိုမျိုး ဖြစ်နေပါတယ်။ ပထမပိုင်း နာရီဝက်မှာတင် ယူနိုက်တက်တို့ ၃ ကြိမ် လူစားလဲ ခဲ့ရပါတယ်။ လီဗာပူးဟာ အဲဒီနေ့က အတော် ညံ့ခဲ့ ပါတယ်။
လီဗာပူးဟာ အသင်းကောင်း ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ သိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ သူတို့ရဲ့ အရည်အသွေးကို သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ အိုးထရပ်ဖို့ဒ်ကို လာပြီး အနိုင်ယူ နိုင်စွမ်း ရှိနေ ပါသေးတယ်။” လို့ ဆိုသွား ပါတယ်။
လီဗာပူး အသင်းခေါင်းဆောင် စတီဗင်ဂျာရတ် ကလည်း လိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ ဦးဆောင် နေသူဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း အိုးထရပ်ဖို့ဒ်မှာ ပထမဦးဆုံး အကြိမ် နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ဆိုသွားခဲ့ပြီး အဆိုပါ ရာသီက ၃-၀ နိုင်ပွဲမှာ ဂျာရတ်ဟာ ပင်နယ်တီ ကနေ ၂ ဂိုး သွင်းပေး ခဲ့ပါတယ်။
ဂျာရတ်က ‘အမှန်ပါပဲ။ လီဗာပူး နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ဟာ ၈ ပွဲ ကစားထားခဲ့ပြီး ၈ပွဲစလုံး နိုင်ထား ခဲ့ပါတယ်။ ၃ ဦးတွဲ တိုက်စစ်ဟာ အကောင်းဆုံး ပုံစံ ပြသနေပြီး သူတို့ဟာ ဂိုးတွေ အများကြီး ပေးထား ရခြင်း မရှိသလို သူတို့ဟာ ဥရောပ ချန်ပီယံပါ။ လီဗာပူးတို့ ယူနိုက်တက်ကို ဘာကြောင့် အနိုင်ရမှာလဲ ဆိုတဲ့ အခြား အကြောင်းပြချက် ခင်ဗျားတို့ လိုချင် သေးလို့လား? ကျွန်တော် ခြားနားတဲ့ အရာ ပြောလိမ့်မယ်လို့ ခင်ဗျားတို့ ထင်နေလို့လား?” လို့ ဆိုသွား ပါတယ်။